ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆွစ်ဖ်-တတ္တယ်ကြယ်တံခွန် နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် များစွာသောဥက္ကာခဲများ
နတ်ဘုရားဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ အတွက် Perseides ကို ကြည့်ပါ။ မိုင်ဆင်နေး တော်ဝင်မိသားစု အတွက် Perseid dynasty ကို ကြည့်ပါ။
ပါဆီးအစ် /ˈpərsiːɪdz/ ဟာ ဆွစ်ဖ်-တတ္တယ် ကြယ်တံခွန် နဲ့ ဆက်စပ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမြီးတန်းဟာ ပါဆီးယပ်စ် ကြယ်တာရာ အတွင်းက ထွက်ပေါ်လာလို့ ကြယ်ကြွေ (ဥက္ကာပျံ) အစုအဝေးကို ပါဆီးအစ်လို့ ခေါ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိဒဏ္ဍာရီမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ ပါဆီးယပ်စ်ရဲ့ သားကို ရည်ညွှန်းတဲ့ ပါဆေးဒိစ် (Περσείδες) ကနေ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရယူထားတဲ့ အမည် ဖြစ်ပါတယ်။
နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီ ၏ ဘယ်ဘက်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၏ ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေတန်းရှည်ကို ကောင်းကင်၌ တွေ့ရစဉ်။
36 AD (first record)
ဩဂုတ်လ ၁၂ (ဇူလိုင် ၂၃–ဩဂုတ် ၂၀)
၂ သမိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် ဆက်စပ်မှုများ
၃ ပေါ်ပြူလာ ယဉ်ကျေးမှု
ကမ္ဘာအနီးမှ ဖြတ်သွားသော ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေများ၏ အမြီးတန်းခေါ် ပတ်လမ်းကြောင်းနှင့် ယင်းတို့၏ မိခင် ကြယ်တံခွန် 109P/Swift-Tuttle တို့အကြား ဆက်စပ်မှုကို ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၀၀:၀၀ UTC အချိန်တွင် နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ။ ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေအစိတ်အပိုင်းများ တိမ်တိုက်သည် အတော်အတန် ကျယ်ပြန့်ပြီး (~၀.၁ AU) ပုံအတွင်း ပြည့်နေသည်။
ဆွစ်ဖ်-တတ္တယ် ကြယ်တံခွန်ရဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်းတလျှောက် လိုက်ပါ ဖြတ်သန်းတဲ့ ဥက္ကာပျံ အပိုင်းအစ အစုအဝေးကို ပါဆီးအစ် တိမ်တိုက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတိမ်တိုက်မှာ ပတ်လမ်းကြောင်းတလျှောက် ၁၃၃ နှစ်လျှင် တစ်ပတ်ကျ ဖြတ်သန်းသွားနေတဲ့ ကြယ်တံခွန်ကြီးဆီက ပဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ အမှုန်အမွှား အစိုင်အခဲတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုအမှုန်အမွှား အများစုဟာ တိမ်တိုက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ဝန်းကျင် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒီ အမှုန်အမွှားတွေထဲမှာ ၁၈၆၅ ခုနှစ်ကမှ ကြယ်တံခွန်ကြီးဆီက လွင့်စဉ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ဖုန်မှုန့်များလည်း ပါဝင်ပြီး ကြယ်ကြွေမှု အများဆုံးအချိန် မတိုင်မီရက်မှာ အစောပိုင်း အစုအပြုံလိုက် ကြယ်ကြွေမှုအဖြစ် မြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီတိမ်တိုက်ရဲ့ ကမ္ဘာအနီး ဖြတ်သွားချိန် အရွယ်အစားက ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကန့်လန့်ဖြတ်အနံ ၀.၁ နက္ခတ္တဗေဒယူနစ် (AU) နှင့် ကမ္ဘာပတ်လမ်းအတိုင်း အလျား ၀.၈ AU ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး ကမ္ဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်အားနဲ့ နှစ်စဉ် ကြုံတွေ့ရလို့ ပြန့်ကားလာနေပါတယ်။
ဒီကြယ်ကြွေမှုကို နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လလယ်ခန့်က စတင် တွေ့မြင်ရပြီး ကြယ်ကြွေစီးကြောင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအပေါ် မူတည်ပြီး ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့နဲ့ ၁၄ ရက်နေ့ကြား အချိန်တွေမှာ အထင်ရှားဆုံး မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ အများပြားဆုံး မြင်တွေ့ရချိန်မှာ တစ်နာရီလျှင် ဥက္ကာပျံ အရေအတွက် ၆၀ ကျော်အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီကြယ်ကြွေစုကို ကောင်းကင် တစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံးမှာ မြင်တွေ့ရတတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ အမြီးတန်းက ပါးဆီးယပ်စ် ကြယ်တာရာအတွင်းမှာ ရှိလို့ ကမ္ဘာ့မြောက်ပိုင်းခြမ်းက ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေစုကို အဓိက မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ကြယ်ကြွေစီးကြောင်းရှိရာဆီ ရွေ့တဲ့ ကမ္ဘာခြမ်းက ဥက္ကာပျံတွေကို ပို ဆွဲငင်နိုင်တဲ့အတွက် ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ် အများအပြားဟာ အာရုံမတက်ခင် နာရီများမှာ ပူးတွဲပါ သရုပ်ဖော်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဒေသစံတော်ချိန်အလိုက် အများဆုံး ကြွေလေ့ရှိပါတယ်။ ဥက္ကာပျံ အများအပြားဟာ အာရုံတက်ချိန်နဲ့ မွန်းတည့်ချိန်တွေမှာ ကြွေတတ်ပေမယ့် နေ့ အလင်းရောင်ကြောင့် မြင်ရလေ့ မရှိပါဘူး။ တချို့ကတော့ ကမ္ဘာ့ လေထုအတွင်းကို ပွတ်တိုက် ဝင်ရောက်လာလို့ တောက်ပါတဲ့ အမြီးတန်း ရှည်များနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ မီးလုံးများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သန်းခေါင်မတိုင်မီ မြင်ရတတ်ပါတယ်။ ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေ အများစုကတော့ လေထုတွင်း အမြင့် ၈၀ ကီလိုမီတာ (၅၀ မိုင်)မှာတင် လောင်ကျွမ်း ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ 
ESO ၏ VLT အထက်တွင် တွေ့မြင်ရသည့် ၂၀၁၀ ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေများ
ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်ပေါ်သည့် ကာလ
ဇူလိုင်လ ၁၇ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်
ဩဂုတ်လ ၁၁-၁၂  (ZHR max 150)
၂၀၁၅ ဇူလိုင်လ ၁၇ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၁-၁၃  (ZHR max 95) (လဆန်း ဩဂုတ် ၁၄)
၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ၁၇ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၃ (ZHR max 68)  (လပြည့် ဩဂုတ် ၁၀)
၂၀၁၃ ဇူလိုင်လ ၁၇ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၂ (ZHR max 109) 
၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ ၁၇ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၂ (ZHR max 122) 
၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၁၇ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၂ (ZHR max 58)  (လပြည့် ဩဂုတ် ၁၃) 
၂၀၁၀ ဇူလိုင်လ ၂၃ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၂ (ZHR max 142) 
၂၀၀၉ ဇူလိုင်လ ၁၄ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက် ဩဂုတ်လ ၁၃ (ZHR max 173) (ခန့်မှန်းခြေ အများဆုံး ၁၇၃ ခုထိ ကြွေခဲ့ သော်လည်း  ပြည့်လုနီး လ အလင်းရောင်ကြောင့် မှိန်သော ဥက္ကာခဲများကို မမြင်ခဲ့ရ။ )
၂၀၀၈ ဇူလိုင်လ ၂၅ - ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်  ဩဂုတ်လ ၁၃ (ZHR max 116) 
၂၀၀၇ ဇူလိုင်လ ၁၉ - ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်  ဩဂုတ်လ ၁၃ (ZHR max 93) 
၂၀၀၆ ဩဂုတ်လ ၁၂/၁၃ 
၂၀၀၄ ဩဂုတ်လ ၁၂ (ZHR max > 200) 
၁၉၉၄ (ZHR max > 200) 
၁၉၉၃ (ZHR max 200-500) 
၁၉၉၂ ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင် လပြည့်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ဖြစ်စဉ် မမြင်ခဲ့ရ
၁၈၆၄ (ZHR max > 100) 
၁၈၆၃ (ZHR max 109-215) 
၁၈၆၁ (ZHRmax 78–102)
၁၈၅၈ (ZHRmax 37–88)
၁၈၃၉ (ZHRmax 165)
သမိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် ဆက်စပ်မှုများပြင်ဆင်
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ်
တချို့ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များက ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေများကို အေဒီ ၂၅၈ ခုနှစ်က တမန်တော် စိန့်လောရင့်စ် ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ကျမ်းစာလာ နေ့ရက် ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကောင်းကင်မှာ ကျဲပြန့်နေရာက ကမ္ဘာမြေပေါ် ပြန်လာတဲ့ "စိန့်လောရင့်စ်ရဲ့ မျက်ရည်များ" လို့ ရည်ညွှန်းကြပါတယ်။တမန်တော်ဟာ တံကျင်ပေါ်မှာ အရှင်လတ်လတ် မီးကင်ခံခဲ့ရသူလို့ ကျမ်းစာက ဆိုပြီး မြေထဲပင်လယ်ဒေသ ရိုးရာ ဒဏ္ဍာရီတွေက ဆင်းသက်လာတဲ့ အယူအဆအရ ဩဂုတ်လ ၉-၁၀ ရက် ညကောင်းကင်ယံက ကြယ်ကြွေတွေဟာ အဲဒီ လောင်မြိုက်ခဲ့တဲ့ မီးတွေ ဖြစ်ပြီး မြေပြင်ပေါ်ထိ ရောက်လာပြီး အေးခဲသွားတဲ့ ဥက္ကာခဲတွေကိုတော့ "စိန့်လောရင့်ရဲ့ မီးသွေး" တွေလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ခရစ်ယန် နေ့ထူးသတ်မှတ်ခြင်းလို့ ခေါ်ကြတဲ့ တမန်တော်နဲ့ နတ်ဘုရားများဆိုင်ရာ ပွဲတော်ရက်တွေ သတ်မှတ်တဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ကို ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တို့က လက်တင်အမည် Laurentius ကို အသံဖလှယ်ပြီး Laurentia လို့ မှည့်ခေါ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။  
၁၈၃၅ ခုနှစ်မှာတော့ အဒေါ့ဖ် ကွယ်တီလတ် (Adolphe Quetelet) က ဒီကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ်ဟာ ပါဆီးယပ်စ် ကြယ်တာရာဆီက ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ထုတ် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။  ၁၈၆၂ ခုနှစ်မှာ ဆွစ်ဖ်-တတ္တယ် ကြယ်တံခွန် ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပြီးနောက် ၁၈၆၆ ခုနှစ်မှာတော့ အီတလီလူမျိုး နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင် ဂျီအိုဗာနီ ဗာဂျီနီယို ရှီယာပါရယ်လီ (Giovanni Virginio Schiaparelli) က ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ်နဲ့ ကြယ်တံခွန်တို့ကြားက ဆက်စပ်မှုကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကို အန်ဂျလို ဆက်ရှီ (Angelo Secchi) ထံ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာတွေထဲမှာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
အမေရိကန် အဆိုတော်-တေးရေးဆရာ ဂျွန်ဒန်းဗားက ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် အက်စ်ပန် အနီးက တောင်တန်းတွေဘက်ဆီ မိသားစုနဲ့ အပျော်စခန်းချခရီးထွက်ခဲ့စဉ်က ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံကို သူ့ရဲ့သီချင်း "Rocky Mountain High" မှာ "I've seen it raining fire in the sky" လို့ ရည်ညွှန်း စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကျော် ဂျပန်တီးဝိုင်း Sandaime J So​​ul Brother ရဲ့သီချင်း R.Y.U.S.E.I (ဥက္ကပျံ) မှာ ပါဆီးအစ် ဥက္ကာပျံများ မိုးရွာသလို ကြွေကျခဲ့ကြပုံကို မိုးစက်ကလေးများက အမြီးတန်းလေးတွေ ချန်ထားပြီး သက်ဆင်းလာသလိုပဲလို့ သီကုံး စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Dr. Bill Cooke (2012-08-11)။ NASA Chat: Stay ‘Up All Night’ to Watch the Perseids!။ NASA။ 2013-08-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ ၂.၈ Gary W. Kronk။ Observing the Perseids။ Meteor Showers Online။ 10 August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-08-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ Moore၊ Patrick; Rees၊ Robin (2011)၊ Patrick Moore's Data Book of Astronomy (2nd ed.)၊ Cambridge University Press၊ p. 275၊ ISBN 0521899354
↑ ၄.၀ ၄.၁ Żołądek၊ P.; et al. (October 2009)၊ "The 2004 Perseid meteor shower - Polish Fireball Network double station preliminary results"၊ Journal of the International Meteor Organization၊ 37 (5): 161–163၊ Bibcode:2009JIMO...37..161Z
↑ Dr. Tony Phillips (June 25, 2004)။ The 2004 Perseid Meteor Shower။ Science@NASA။ 20 March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ D.W. Hughes (1996)။ "Cometary Dust Loss: Meteoroid Streams and the Inner Solar System Dust Cloud"။ in J. Mayo Greenberg (ed.)။ dust stream&pg=PA375#v=onepage&q=perseid dust stream&f=false The Cosmic Dust Connection တန်ဖိုး |url= စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။ Springer Science & Business Media။ p. 375။ 2015-07-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What isaMeteor Shower?။ 17 August 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA All Sky Fireball Network: Perseid End Height။ NASA Meteor Watch on Facebook (2012-08-11)။ 2012-11-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perseid Meteor Shower 2016: When, Where & How to See It။
↑ Meteor Showers 2015။ nasa.gov။ 2015-08-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perseids 2014: visual data quicklook။ Imo.net (2014-08-13)။ 24 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-08-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perseids 2013: visual data quicklook။ Imo.net (2013-09-23)။ 24 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perseids 2012: visual data quicklook။ Imo.net (2012-10-22)။ 25 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perseids 2011: visual data quicklook။ Imo.net (2011-10-06)။4June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How to See the Best Meteor Showers of the Year: Tools, Tips and 'Save the Dates'။ nasa.gov။ 2010-11-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How to See the Best Meteor Showers of the Year: Tools, Tips and 'Save the Dates'။ nasa.gov။ 2010-08-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perseids 2009: visual data quicklook။ Imo.net (2010-04-26)။ 16 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-08-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ Perseids 2008: visual data quicklook။ Imo.net (2009-06-06)။ 24 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-08-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Perseids 2007: first results။ 27 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Perseids 1992. New outburst announces return of P/Swift-Tuttle" . Bibcode: 1992JIMO...20..192B.
↑ "Science: Tears of St. Lawrence"၊ TIME၊ 1926-08-23။ 2009-08-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (အီတလီ) Falling stars and coal under the basil Archived 11 June 2016 at the Wayback Machine.
↑ (အီတလီ) The Coal of Saint Lawrence
↑ (အီတလီ) Castrum Inui Archived 14 August 2016 at the Wayback Machine.
↑ "SHOOTING STARS"၊ utestudents BLOG။
Wikimedia Commons ရှိ ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေများ နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
Worldwide viewing times for the 2016 Perseids meteor shower
Perseid Observing Conditions (The International Project for Radio Meteor Observation) Archived7February 2017 at the Wayback Machine.
2014 Perseids Radio results (RMOB)
Perseid Visibility Map (2014 NASA Meteoroid Environment Office)
2009 Perseid Meteor Fireball Archived7August 2009 at the Wayback Machine.
NASA website on the Perseid shower of 2009 Archived 24 March 2010 at the Wayback Machine.
Sky & Telescope Magazine - Perseids at Their Prime
2012 Image of Perseids emanating from the radiant
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါဆီးအစ်_ကြယ်ကြွေများ&oldid=676758" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။